အိမ် သို့မဟုတ် တိုက်ခန်း ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်? - Phoenix Emperor
Home / Blog / အိမ် သို့မဟုတ် တိုက်ခန်း ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်?
သင့်အိမ်ကိုအမြန်ရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းရန်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီခေတ်ကာလမှာ သင်၏အိမ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းချခြင်းဟာရှုပ်ထွေးမခက်ခဲတော့ပါဘူး။သင်၏အိမ်ကိုရောင်းရန် Online ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့စဉ်းစားပါ။
၀ယ်သူ၏စိတ်ထဲသို့သင်ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ပြီးသူရှာနေသည့်အရာကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားပါကဝယ်သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုသင်ကောင်းစွာအကဲဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဝယ်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့စဉ်းစားပါ။
သင့်အိမ် သို့မဟုတ် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပါ။
စျေးနှုန်းကို အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံရှိသူတွေနဲ့ သင့်အိမ်ခြံမြေစျေးနှုန်းကို သတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ Internet ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ စျေးနှုန်းများကိုလည်းလေ့လာစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Internet ပေါ်က အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေကို လေ့လာပါ။
သင်၏အိမ်ခြံမြေအတွက် ၀ယ်သူများထံရောက်ရှိရန် Internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေကို အပ်လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရောင်းချမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး လူတွေဆီပိုမိုရောက်ရှိရန်အတွက် အကိုက်ညီဆုံး/အသင့်တော်ဆုံး အကျိုးဆောင် Website တွေကိုအပ်လို့ရပါတယ်။
Website နဲ့ Social Media တွေမှာအိမ်ခြံမြေရောင်းပါ။
မည်သည့်ရောင်းချမှုအတွက်မဆိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းသည့်အခါသင်၏အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်သို့အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နိုင်ရန် Website များနဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ အလွယ်တကူကြေငြာနိုင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ပုံများနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့အပြင် Data တွေကိုအလွယ်တကူပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။